भारतबारे प्रधानमन्त्रीले के भने ? - Kendrabindu Nepal Online News
भारतबारे प्रधानमन्त्रीले के भने ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको व्यापार र लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सडक र रेल सेवाको विस्तार गरेर दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन नेपाल सरकार लागि परेको बताए ।
आईतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नेपाल–भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलन’ को उद्घाटन गर्दै उनले दुवै मुलुकको आर्थिक विकास र जनतासँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न पनि पारवहन सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको व्यापारको ठूलो हिँस्सा भारत र भारतबाटै हुने भएकाले त्यसलाई अझै सहज ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले छोटो समयमै नेपालमा सहज ढंगले सामानहरुको ढुवानी हुने गरी पारबहन सहजीकरण गर्न भारतीय पक्षबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदुत मंजीवसिंह पुरीले नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्न भारत तयार रहेको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा दुवै देशका व्यापारी तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञहरु, सरकारी पदाधिकारीहरुले दुई मुलुकबीच हुने आयात/निर्यात सहजीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल गर्नेछन ।
kp oli, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
Prevचोरी गर्न च्यानल गेट फोर्दाफोर्दै चोर च्याप्प
प्रेमिकाको हत्या गरी फरार युवक १२ वर्षपछि पक्राउNext
नेपालसँग हारेपछि माल्दिभ्सका प्रशिक्षककाे जागीर गयो
प्रधानमन्त्रीकाे स्वास्थ्य अपडेटदेखि सागमा नेपालले सनसनी मच्चाउँदैसम्म (भिडियोसहित)
हवाई सुरक्षाामा सरकार गम्भीर-पर्यटन मन्त्री भट्टराई
सुदूरपश्चिमका उदाउँदा स्रष्टा : सुभाषचन्द्र भण्डारी
ऋचा शर्मा बाँधिइन् विवाह बन्धनमा
पिएसएलमा सन्दीपसहित ८ जना नेपाली खेलाडी बिकेनन्
संगीताकाे ऐतिहासिक सफलतासँगै नेपालकाे पोल्टामा ४३ स्वर्ण
विवाह : बन्धन कि सहकार्यको नयाँ अवसर ?
‘स्काई वाक टावर नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा कोशेढुंगा’
माल्दिभ्समाथि नेपालकाे जित, शीर्ष स्थानमा उक्लियो